AGUERO iyo HIGUAIN oo iska hor imaanaya markii ugu horreysay 10-sano kaddib…(Bal Eeg Tiro-koob laga sameeyay ka hor kulankooda Caawa) – Gool FM
AGUERO iyo HIGUAIN oo iska hor imaanaya markii ugu horreysay 10-sano kaddib…(Bal Eeg Tiro-koob laga sameeyay ka hor kulankooda Caawa)
Byare February 10, 2019
(England) 10 Feb 2019. Manchester City ayaa caawa Fiidkii marti galin doonta Chelsea kulan labada kooxba muhiim u ah.
Wiilasha Guardiola ayaa doonaya inay hogaanka Premier League kala wareegaan Liverpool halka Blues ay dagaal ugu jirto afarta sare.
Haddaba kulanka caawa ayaa ka dhigan in Weeraryahannada isku dalka ka soo jeeda ee Sergio Aguero iyo Gonzalo Higuain isla markaana kala wayn Lixda bilood oo qura ay iska hor imaanayaan markii ugu horreysay muddo 10-sano ku dhow.
The Sun ayaa is bar bardhig dhanka kooxaha iyo midka xulka ah ku sameysay labada wiil ee reer Argentina iyadoo tiro-koobka laga soo bilaabay kal ciyaareedkii 2006-07.
Aguero ayaa ka kulamo badan Higuain kana goolal badan dhanka kooxda iyo Xulka balse weeraryahanka Cusub ee Chelsea ayaa ku fiican dhanka Rikoodhka goolasha kulankiiba la dhaliyo oo wuxuu heystaa 0.59 halka Xididga Man City uu heysto 0.57.
Higuain ayaa 384 kulan ku dhaliyay 226-gool halka Aguero uu 403 kulan ku dhaliyay 231-gool.
Dhanka xulka Aguero ayaa 89-kulan ku dhaliyay 39-gool halka Higuain uu 75-kulan ku dhaliyay 31-gool.
EEG isbar-bardhiga AGUERO iyo HIGUAIN:
“Real Madrid way awoodaa inay soo qabato kooxda Barcelona” - Ramos
Luka Modric oo 2-daqiiqo Canaan ku waday Vinicius kulankii Xalay ay ka adkaadeen Ateltico Madrid....(Muxuu ku maagay??)